Maitiro echiJapan echivanhu | Absolut Kufamba
Tsika dzechiJapan dzekugadzira
Vanodaro - muJapan, tsika dzemazuva ano uye dzekare dzinouya pamwechete muchiyero chakakwana, Uye ini ndinofunga ndizvozvo nekuti chokwadi ndechekuti inyika inonetsa kune chero wekuMadokero, ine kumwe kunyarara, uye hunhu hwatino kupihwa nehunyanzvi hwayo hunoratidzwa mukushomeka kwezvakaumbwa, matembere ayo, mifananidzo yaro nekunyora, kunakidzwa kwemachira ayo, uye hunyoro hwemafomu ekuratidzira kwaro kwakawanda uye kwepakutanga.
Muchinyorwa chino ini ndinokuudza nezve mamwe emabasa emhizha ayo akaitika muJapan, uko chero hunyanzvi hwekugadzira hune huzivi hwehungwaru hwechokwadi. Mazhinji eaya emhizha echinyakare akarasika, mamwe akave nemaindasitiri, uye zvidimbu zvavo zvinotengeswa kwese kwese.
2 Chiumbwa cheJapan
3 Hakata zvidhori
4 Kuenda apa
Chimwe chezvinhu zvakakosha, kuzivisa uye zvekare zvigadzirwa zveJapan ndizvo zveCeramics Bizen, kuti iwe uchakurumidza kusiyanisa neyakaomarara senge simbi, tsvuku tsvuku, isina enamel, kunyangwe kana paine zvisaririra zvemadota akanyungudika anogona kutaridzika kunge enamel uye mamaki anokonzerwa nemoto wehovhoni yehuni.
Bizen crafts, iyo inotora pamhando dzakawanda, inogadzirwa zvishoma nezvishoma, kwenguva yakareba. Moto wehuni unofanirwa kuchengetedzwa patembiricha yakakwira kwemazuva gumi kusvika gumi nemana anosanganisira maawa marefu uye matani ehuni, saka kupfura kunoitika kamwe chete kana kaviri pagore.
Kudakadza kuya uye runako rwe Chiumbwa cheJapan chinotangira kubva muzana ramakore rechi XNUMXPamberi pacho, pakanga pasina chakafanana nayo, uye chakabva paruoko rwevashandi veKorea vakasvika munzvimbo dzekare yeHizen pachitsuwa cheKyūshū, ndokutanga Europe ku chiteshi cheImari, ndosaka ichizivikanwa se porcelain imari. Kusvikira kupera kwezana iro ramakore, muJapan porcelain yaigadzirwa chete munzvimbo ino, asi kuri pakupera kwezana ramakore regumi nemanomwe iyo yakatanga kugadzirwa muKyoto nemamwe mataundi.
Imwe mhando ye porcelain iri kakiemon, ine polychrome yekushongedza, rakagadzirwa naSakaida Kakiemon (1595-1666). Zvimwe zvezvinhu zvezvidimbu iwo madziro avo matete, iwo machena machena hwaro uye hunoshamisa hunhu hwemavara avo enamel.
Hunhu hwakanyanya ihwo hwevhu Kutani, ine kumashure kwayo kwegoridhe uye nemavara mashanu: yero, girini, tsvuku, bhuruu nepepuru, uye nhema, uye zvinoratidza runako rwezvakasikwa, kunyanya kuburikidza nemaruva neshiri.
Ceramics kana porcelain nabeshima yakafanana nekukwana nekuda kwehunhu hwepamusoro hwezvinhu zvinoshandiswa nemaitiro ake akasarudzika.
Satsuma porcelain inoratidzirwa nekupenya, ine polychrome mavara uye yakashongedzwa negoridhe. Iyo yakarongedzwa muzvikamu zviviri zvakafara, chimiro chebhuruu uye chena, chine chishongo pasi pechando; uye iyo polychrome maitiro, iine yekuwedzera kupfura kuitira kugadzirisa mamwe mavara, pane glaze.
Madhora anoita basa rakakosha muhupenyu hwemaJapan, Muchokwadi, iyo Hinamatsuri inopembererwa, mutambo wemadhora, uyo wave uchipembererwa kubva panguva dzekare. Uyu mutambo wechivanhu unosanganisira kupfekedza madhongi muhembe dzaHeian Era, vasati vakandwa murwizi kuti vabvise vasikana mweya yakaipa, asi izvozvi zvidhoma zvasara pachena paatari.
Kune akawanda marudzi emhando asi zvimwe kune vekuMadokero ayo anozivikanwa ndeaya Hakata ningyō, chiJapan chidhori chevhu kubva kunzvimbo yeguta reFukuoka. Kune akasiyana akasiyana avo maererano netemaiti yavo: yechinyakare maJapan theatre, runako rwevakadzi, samurai, nezvimwe. Aya madhora aive zviyeuchidzo zvakatorwa nemauto eAmerica zvakanyanya mushure mekugara kweJapan, nekudaro vakave vakakurumbira, zvisinei mavambo avo akadzokera kuzana ramakore rechiXNUMX.
Yonaguni-orimono izita rakajairika remachira akagadzirwa pachitsuwa che Yonaguni-jima, kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwezvitsuwa zveJapan. Uye kubva muna1987 ichionekwa sechinyakare kutengeserana kunozivikanwa nehurumende.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti kumazera emakore mapatani uye mavara erudzi urwu rwejira jakachinja, maruva madiki ane mutsvuku uye yero mapatani uye machira ane mitsetse anoramba aripo.
Pane hunyanzvi shibori, rinova ndiro zita rakapihwa muJapan kune hunyanzvi hwekuita dhayi.
Kimono ndiwo mapfekero echinyakare echiJapan evarume nevakadzi, iyo yave iri nguvo mukushandiswa zvakajairika kusvika makore ekutanga mushure meHondo Yenyika II. MaKimon akagadzirwa nemaitiro echinyakare uye zvakagadzirwa zvakanaka zvinoonekwa semabasa echokwadi ehunyanzvi.
Kimono kugadzira kwakashanduka kusvika muzana ramakore rechi XNUMX, apo kuravira kwesilika kwakatanga kuita fashoni pakati pevaSamurai nevatengesi. Iyo yemhando yepamusoro broketi inogadzirwa nevemhizha inoratidzirwa nekushandisa kwakawanda kwegoridhe nesirivheri yemaruva uye shiri dhizaini, uye nemaitiro echinyakare ejometri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika dzechiJapan dzekugadzira
Iyo yemashiripiti islet yeSan Juan de Gaztelugatxe
7 nzvimbo munyika dzinoita sedzimwe nyika